आज बालुवाटारमा पुगेको नेतालाई ज्योतिष सफल देखाउनु छ, जनता हैन : नारायण वाग्ले :: Setopati
सुसन चौधरी काठमाडौं, साउन १६
नागरिक अगुवा तथा पत्रकार नारायण वाग्लेले नागरिक आन्दोलन नयाँ शिराबाट सुरू गरिने बताएका छन्।
वाग्लेले लोकतन्त्र भनेर ल्याएको कुरा पार्टीतन्त्रको रुपमा आएको र पार्टीतन्त्रको नाममा गुटतन्त्र हुँदै लुटतन्त्र भएर मौलाएको बताए।
‘त्यसैले आज हामी सडकमा उभिएका छौं साथीहरू,’ वाग्लेले भने।
वाग्ले शनिबार ‘बिपी प्रतिष्ठान बचाऊ र बदल’ खबरदारीका लागि नागरिक आन्दोलनले माइतीघरबाट बानेश्वरसम्म मार्चपासपछि बोल्दैथिए।
उनले त्यसरी लोकतन्त्रबाट पार्टीतन्त्र, गुटतन्त्र हुँदै लुटतन्त्र मच्चाइएको कारण थाहा छ कि छैन? भन्दै प्रश्न गरे।
वाग्लेले भने, ‘हामीलाई थाहा छ छैन? किन थाहा छ भने आज नेताहरू आफैं बन्धक छन्। आज हामी बालुवाटारमा धर्ना गर्नु के छ भने बालुवाटारभित्र स्वार्थको बन्ध भएको नेता छ, उसलाई नागरिकको चेतनाबाट उठाएर ल्याउनुपर्ने र जाग्नुपर्ने भएको छ। जो बालुवाटरामा पुगेका छन्, उनको उद्देश्य ज्योतिषीलाई सफल देखाउनु छ, जनतालाई हैन।’
उनले यसो भनिरहँदा २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन सम्झिए। ‘त्यतिबेला प्रजाले जिते र प्रजातन्त्र आयो भनिएको थियो,’ वाग्लेले भने।
उनले दोस्रो जनआन्दोलनको कुरा पनि उठाए। ‘२०६२/६३ सालको आन्दोलन सकिएपछि जनताको जित भनेका थियौं, हामीले लोकतन्त्र भनेको कुरा पार्टीतन्त्रमा आयो, पार्टीतन्त्र गुटतन्त्रमा आयो र गुटतन्त्र लुटतन्त्रमा आयो।’
वाग्लेले नागरिक आन्दोलनका खातिर आफूहरूसँग कविता रहेको, जनताको स्वामित्वमा रहेका गीत र आवाज रहेको पनि बताए। त्यो आवाज भने लोकतन्त्रलाई जनताको स्वामित्व र नियन्त्रणमा ल्याउनका लागि भएको वाग्लेले बताए।
‘लोकतन्त्रलाई जनताको स्वामित्वमा र नियन्त्रणमा ल्याउन बफादार पार्टी कार्यकर्ता बनाउने, देशलाई, कार्यकर्तालाई, मतदातालाई बफादार पार्टी कार्यकर्ता बनाउने कार्यविरूद्ध निर्भिक नागरिकहरू बनाउने र त्यो चेतनाको आन्दोलनका लागि हामी नागरिक आन्दोलन नयाँ शिराबाट सुरू गर्दैछौं,’ वाग्लेले भने।
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचार छरपस्ट र छर्लंग भइरहेको भन्दै वाग्लेले त्यसविरूद्ध सिंहदरबार घेराउ गरिएको घटना सुनाए।
‘त्यसदिन हामीलाई गिरफ्तार गरियो, हामी हिरासतमा बस्यौं, त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्रीको आखिरी दिन थियो त्यो,’ वाग्लेले भने, ‘त्यसपछि हामी पाँच राजनीतिक दलसँग छलफलमा बस्यौं, यो पार्टीतन्त्र भयो लोकतन्त्र भएन भनेर प्रष्ट भनेका थियौं र चिकित्सा शिक्षाको विसंगतिको आवाज पनि बुलंद गरेका थियौं।’
त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका नेताले दिएको र भनेको कुराले आफैं आन्दोलित भएको उनले सम्झिए।
‘हामीले नेपाली कांग्रेसको एक जना पदाधिकारीलाई त्यहीँ भन्यौं, केही गरी तपाईंको पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने केही दिनभित्रै डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन सुरू हुने वाला भयो। र, त्यसको भोलिपल्ट नागरिक आन्दोलनले वालवाटार मार्चपास गर्नुपर्ने भयो,’ वाग्लेले भने, ‘तपाईंको पार्टी सभापति प्रधनमन्त्री हुनुभन्दा पहिला नागरिक आन्दोलन मात्र नभएर चिकित्सा शिक्षाको दस वर्षदेखि जारी आन्दोलन राम्रोसँग ब्रिफ गर्नुहोला भनेका थियौं। ब्रिफ गरिएको रहेछ। आज हामी हेरौं, प्रधानमन्त्री उनी भए। पहिलो काम के गरे? यत्रो दस वर्षदेखि जारी चिकित्सा शिक्षाको आन्दोलनलाई अपमान र अवमूल्यन हुने गरी मन्त्रालयमा कस्तो नियुक्ति गरे?’
‘जनताका लागि लोकतन्त्र’ नाराका साथ भएको कार्यक्रममा ‘लोकतन्त्रलाई मिचेर पार्टीतन्त्र आएको’ मार्चपासमा सहभागी नागरिकहरूले आवाज उठाएका थिए।
‘मानौं सेतो कोट शासकको पोसाक हो, मानौं स्थेथिस्कोप शासन गर्ने हतियार हो’ नारा लगाउँदै नागरिकहरू माइतीघरबाट बानेश्वरतर्फ लागेका थिए।
बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा वाग्ले र डा. जीवन क्षेत्रीले मन्तव्य दिएका थिए। मन्तव्यसँगै भूपाल राई, लक्ष्मी रुम्बा, संगीता उरावले कविता सुनाएका थिए। त्यसमा प्रदीप देवानले सांगीतिक प्रस्तुति दिएका थिए।
कार्यक्रम सुरू गर्दै संगीता उरावले बेतिथिविरूद्ध कविता प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
‘तानाशाही अन्त्य हुनुअघि लेखिएको कविता भए पनि यिनीहरू फेरि पनि आइरहन्छन्। सत्तामा आएपछि मनपरी भइरहन्छ,’ उनले भनिन्।
संगीतापछि रुम्बाले ‘तेस्रो इतिहास’ शीर्षकमा कविता वाचन गरेकी थिइन्।
प्रदीप देवानले भने ‘हाम्रा स्वरहरूमा प्रतिबन्ध लगाउँदै, हाम्रा ओठहरूमा ताल्चा झिन्याउँदै..’ बोलको गीतमा सांगीतिक प्रस्तुति दिएका थिए।
त्यसपछि मन्तव्य दिन आएका डा.जीवन क्षेत्रीले ‘मान्छे मरे मरुन्, तर हामी व्यापार गर्ने हो’ भन्ने सबैलाई ओल्याउँदै यो साझा खबरदारी रहेको बताएका थिए।
भूपाल राईले ‘यो देशलाई खगेन्द्र संग्रौलाको खाँचो छ भन्दा कविता पूर्ण हुन्छ’ भन्दै ‘यो देशलाई अझै मेरो खाँचो छ’ भन्ने शीर्षकमा कविता सुनाएका थिए।
तस्बिर/भिडिओ: सुसन चौधरी/सेतोपाटी
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन १६, २०७८, २१:३२:००